Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka oo taageeray dowladda, farriin nabadeedna u diray taliyihii hore ee ciidanka Booliska – Kalfadhi
April 18, 2021 April 18, 2021 Hassan Istiila
Xildhibaanno taageersan dowladda oo xalay shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Muqdishu, ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin dad ay sheegeen in ay usoo tafa-xiiteen sidii ay qal-qal uga abuuri lahaayeen caasimadda Soomaaliya.
Xildhibaan Ubax Tahliil oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegtay in qofka uu qaldami karo balse aysan aheyn in khalad lagu saxo khalad, dhinaca kale dadka reer Muqdishu ayey ugu qaabday in aysan dhegeysan rag ay sheegtay in afar sanno ay raadinayeen colaad si ay kursi u helaan.
Xildhibaannada ayaa caddeysay in ay garab taaganyihiin taliyihii hore ee ciidanka Booliska Gobolka Banaadir Saadaq John, dowladana ay ballanqaaday in aysan weerari doonin, uusana marna ku fakarin in lagu soo duulayo madaama ay tahay xildhibaannadiisa.
Taliyihii hore ee ciidanka Booliska Gobolka Banaadir Saadaq John, oo saldhig ciidan ka dhigtay xaafadda Shirkole ee Muqdishu, ayaa sheegay in dowladda ay damacsantahay in ay soo qabato balse uu iska difaaci doono.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xeer madaxweyne darajadii ciidanka kaga xayuubiyey Taliyihii hore ee Booliska gobolka Banaadir Sareeye Guuto Saadaq Cumar Maxamed (Saadaq Joon).
Shalay ayay ahayd markii xilka laga qaaday General Saadaq Joon kadib markii uu sheegay in uu joojiyey kulankii loo balansanaa ee Golaha Shacabka, kaas oo ajandihiisu ahaa ka doodista mooshin la xiriira doorashooyinka.
Midowga Musharaxiinta mucaaradka oo diiday in ay la kulmaan madaxweyne Farmaajo